-DHAMMA RADIO CHANNELS / LIVE / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] DHAMMA RADIO CHANNEL 15 -...
Tags: မင်းကွန်တိပိဋကဆရာတော်၏ မဟာဗုဒ္ဓဝင် - Dhamma Radio Channel 15 မင်းကွန်းဆရာတော် ဗုဒ္ဓ၀င် Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ဝိပဿနာဆို...
Tags: ဓမ္မဒူတအရှင်ပညာဇောတ , ဝိပဿနာ , သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ , ဓမ္မဒူတ , dhammaduta , dhamma du ta , vipassana , wipatthanar , wi pat tha nar , ashin pyin nyar zaw ta , ashin pinnyajotta Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ဒို့ဗမာဘယ...
Tags: သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ , ဦးဝီရသူ , ဦးဝီရသူ , ဦးဝီရသူ(မစိုးရိမ်) , ဒို့ဗမာဘယ်လဲ , U Wi Ya Thu , Ma Soe Yain , U We Ya Thu , Thar Tha Na Par La , UWiYaThu , U Wi Ya Thu , tharthanaparla , sarsanaparla , sar sa na par la , doeburmaballal , doe burma bal lal , wirathu , wiyathu , werathu , weyathu Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ အမြဲရှုံးတ...
အမြဲရှုံးတဲ့ ဘောလုံးပွဲ- ဦးဝီရသူ(မစိုးရိမ်)
Tags: သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ဦးဝီရသူ ဦးဝီရသူ(မစိုးရိမ်) အရှင်ဝီရသူ ဦးဝီရသူ အမြဲရှုံးတဲ့ဘောလုံးပွဲ သာသနာ့ပါလ သာသနပါလ uwiyathu uweyathu u wi ya thu u we ya thu tharthanaparla sarsanaparla thar tha na par la sar sa na par la amyalshonetaeballpwalamyal shone tae ball lone pwal wirathu wiyathu werathu weyathu Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / W - U Wirathu - ဦးဝီရသူ (မစိုးရိမ်) PeaceMaker Myanmar Monk...
အရှင်ဘဒ္ဒန္တ၀ိစိတ္တာဘိဝံသ (၀ီရသူ - မစိုးရိမ်) PeaceMaker Myanmar (Burmese) Monk Ashin Wirathu
Tags: ဆရာတော် ၀ီရသူ ဦးဝီရသူ ဦးဝီရသူ မစိုးရိမ်တိုက် Uwiyathu uweyathu u wi ya thu u we ya thu ma soe yein masoeyein wirathu wiyathu werathu weyathu Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ မိခင်ရွာက...
မိခင်ရွာကသာသနာ - ဦးဝီရသူ (မစိုးရိမ်)
Tags: သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ဦးဝီရသူ(မစိုးရိမ်) မိခင်ရွာကသာသနာ tharthanaparla sarsanaparla thar tha na par la sar sa na par la Uweyathu U weyathu Uwiyathu U wiyathu U we ya thu wi ya thu mikhinywarkatharthanar mi khin ywar ka thar tha nar mikhinywarkasarsana wirathu wiyathu werathu weyathu ဦးဝီရသူ Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ နန္ဒာသိန်း...
နန္ဒာသိန်းဇံ - ဗုဒ္ဓပညာ (ရွှေညဝါ)
Tags: သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ နန္ဒာသိန်းဇံ ဗုဒ္ဓပညာ ရွှေည၀ါ သာသနာ့ပါလ သာသနပါလ tharthanaparla sarsanaparla thar tha na par la sar sa na par la nandatheinzan nanda thein zan buddha shwenyawar shwe nya war Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / P - Phoe Pyin Nyaw - ဖိုးပညော(သပိတ်ကျင်း) မိခင်ရင်ေ...
မိခင်ရင်သွေး ဘာလေးမွေးမလဲ -ဖိုးပညော (သပိတ်ကျင်း )
Tags: ဖိုးပညော(သပိတ်ကျင်း) သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ၀ံသာနု မိခင်ရင်သွေးဘာလေးမွေးမလဲ သာသနာ့ပါလ သာသနပါလ tharthanaparla sarsanaparla thar tha na par la sar sa na par la phoepyinnyaw phoe pyin nyaw Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ငွေနဲ့ပေါ...
ငွေနဲ့ပေါက်လို့ ဘာသာမပျောက်စေနဲ့ - ဖိုးပညော (သပိတ်ကျင်း)
Tags: ဖိုးပညော (သပိတ်ကျင်း) သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ဝံသာနု ငွေနဲ့ပေါက်လို့ ဘာသာမပျောက်စေနဲ့ သာသနာ့ပါလ သာသနပါလ tharthanaparla sarsanaprla thar tha na par la sar sa na pra la phoepyinnyaw phoe pyin nyaw Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ကျောက်ကွင...
Tags: ဘာသာခြားလေ့လာရေး ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သခင်မြတ်ဆိုင် tharthanaparla sarsanaparla thar tha na par la sar sa na par la kyaukkwinayaytawpon kyauk kwinayay taw pon ashinoakkahta ashin oak ka hta ကျောက်ကွင်း kyaukkwin Pages: 1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 of 128